> Resource > Ladnaansho > Recovery MKV: Ladnaansho MKV Videos masaxay ama lumay fudayd
Waxaan soo kaban karto, tirtiray MKV Videos?
Cidna ma ogaan barnaamij kasta waa awoodaa inuu ka soo kabsado files MKV? Waxaan si qalad ah la tirtiro 3 MKV videos kuwaas oo aad u muhiim ii. Waxaan u baahanahay inaan u helaan dib. Qof kasta oo ii caawin kartaa?
Files MKV mar walba waa u videos HD iyo filimada. Haddii aad qabto video MKV on your computer ah, waxay ka dhigan tahay in aad ku raaxaysan karaan HD videos mar kasta aad rabto. Tan iyo files MKV had iyo jeer waa mid aad u ballaaran, si dhib iyaga ma doonan kartaa recycle bin. Si kastaba, weli waxaad Qasab ma aha in aad u xanaaqsan. Waxaad soo kaban karto, lumay ama la tirtiro videos MKV la dhinac saddexaad software MKV video kabashada.
Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac noqon doorashadaada wanaagsan lahaa. Barnaamijka Tani waxay kaa caawinaysaa in aad ka bogsato formatted, tirtiray ama xataa videos MKV musuqmaasuqa ka your computer iyo aaladaha kaydinta dibadda sida kaarka SD, USB iyo HDD mobile.
Download version tijaabo ah Wondershare Data Recovery hoos ku qoran. Version maxkamad Arintan waxay u sahlaysaa inaad computer ama aaladaha kaydinta dibadda si scan si aad u hubiso in files MKV helay by tahay waxa aad rabto in aad soo kaban ama aan.
Talaabooyinka inuu ka soo kabsado tirtiray ama u Khasaaray MKV Videos
Tallaabada 1 Select Ladnaansho Mode Si aad u hesho Videos tirtiray MKV
Halkan waxaan ku qabtaan kabashada MKV la Windows version of Wondershare Data Recovery. Haddii aad isticmaalayso Mac ah, waxaad kala soo bixi kartaa Wondershare Data Recovery for Mac.
Kadib markii ay barnaamijka on your computer, waxaa lagu siin doonaa 4 hababka soo kabashada sida aad ka arki kartaa interface barnaamijka.
Si aad u soo kabsado tirtiray videos MKV, fadlan dooro "lumay Recovery File" mode.
Tallaabada 2 Dooro HDD ama Device External Kaydinta Waxaad doonaysaa inay ka soo kabsadaan MKV Faylal ay ka
In tallaabadaas, dhammaan qalabka lagu kaydiyo dibadda HDD iyo xiran on your computer doonaa oo dhan la ogaan. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan mid ka mid sax ah inuu ka soo kabsado aad files MKV tirtiray ka dibna riix "Scan" inuu ku soo bilowdo.
Tallaabada 3 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh helay faylasha iyo Them Xulo Ladnaansho
Scan ka dib, dhammaan faylasha helo waa la qori doonaa qaybaha ama waddooyinkiisa. Waxaad ku eegaan karo magaca lumay videos MKV.
Files MKV Select aad rabto in aad soo kabsadaan oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya on your computer.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha badbaadiyo files soo kabsaday si ay HDD asalka ah ama qalab lagu kaydiyo dibadda.
Files MKV waa sidaas oo waaweyn in aadan iyaga soo ceshano karaa recycle bin haddii aad iyaga laga badiyay. Waxaa had iyo jeer waa mid aad u muhiim ah in aad dhab ah u eego ka hor la tirtiro ama saaro. Marka laga reebo dib u soo kabashada MKV, waxaad soo kaban karto kale videos, Cajalado, waraaqaha iyo xitaa archives la Wondershare Data Recovery.